हवाई COVID-19 संक्रमण: एक पछि अर्को उच्च रेकर्ड
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई ताजा समाचार » हवाई COVID-19 संक्रमण: एक पछि अर्को उच्च रेकर्ड
सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • स्वास्थ्य समाचार • HITA • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • समाचार • सुरक्षा • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
हवाई COVID-१ Inf संक्रमण सर्जिंग
हवाई पर्यटन फस्टाउँदैछ, र त्यस्तै COVID-19 गैर-खोप नभएको जस्तो हो जुन पहिला कहिल्यै भएको थिएन। २243 नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको साथ Aloha राज्य ठूलो समस्यामा छ।
हवाईमा COVID-19 को नयाँ केसहरू बढ्दै छन् र एक हप्ता भन्दा बढि दिन प्रतिदिन आरोहण गर्दैछन्।
हाल राज्यमा खोप लगाईएको प्रतिशतको संख्यामा हवाईले नयाँ संक्रमण देखीरहेको छ जुन महामारीको पछिल्लो रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा उच्च दिनको तुलनामा दुई गुणा बढी छ।
नयाँ अवस्थामा यस्तो वृद्धि भएपछि, कसैलाई लाग्न सक्छ यो यात्राको जनादेश पुनर्स्थापित गर्ने समय हो तर अहिलेसम्म सरकारले केही परिवर्तन गरेको छैन।
हाल राज्यमा (percent० प्रतिशत) खोप लिइसकेकाहरू घटाउने क्रममा २ संक्रमणले खोप लगाउनु अघि गत वर्षको संख्याको आधारमा 60०० इन्फेक्सन हुने संकेत गर्दछ।
Theand१ दैनिक नयाँ मुद्दाहरूको साथ, अगस्त २,, २०२० महामारीको प्रकोप पछि सबैभन्दा नराम्रो दिन थियो। तर ती खोपहरूलाई तथ्याoring्कमा आधारित आज नयाँ संक्रमणमा सबैभन्दा बढी रेकर्ड गरिएको थियो, र पर्यटन नेता चुप छन्.
होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, र पसलहरू भरिएका छन्। वाइकीबी बीच जत्तिकै लोकप्रिय समुद्र तटहरू, सायद तपाईको तौलियाका लागि ठाउँ पत्ता लगाउन ठाउँ छैन।
त्यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आगमन छैन, तर घरेलु आगमनहरू संयुक्त राष्ट्र महामारी भन्दा पहिले भन्दा धेरै आगमनहरू दर्ता गर्दछ।
हवाईमा कोरोनाभाइरस संक्रमण दर पछिल्लो days दिनहरुमा तीन अंकमा पुगेको छ र हरेक दिन आरोहण गर्दैछ।
होनोलुलु काउन्टीमा १146, हवाई काउन्टीमा 50०, माउ काउन्टीमा १ and र काउ काउन्टीमा new वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
जुलाईमा करीव 78 20 प्रतिशत घटनाहरू समुदाय फैलाएर, २० प्रतिशत ट्राभलबाट फर्केका बासिन्दाहरूको र २ प्रतिशत गैर आवासीय ट्राभलबाट हुन्छन्।
रेकर्ड पर्यटन आगमनको केवल २ प्रतिशत कारण हुन सक्छ, जुन अर्थव्यवस्थाको लागि राम्रो खबर हो, तर संख्याको वृद्धिसँगै, यो पछाडि रोक्ने समय हुन सक्छ.
पछिल्लो समय हवाई नयाँ केसहरू देखिएको संख्याको साथ पूर्ण लक-अन्तर्गत थियो। आज, एक शब्द सरकारी अधिकारीहरु द्वारा भइरहेको छैन।
जुलाई,, २०२१ पछि, पूर्ण रूपमा खोपिएका आगन्तुकहरूले अब १० दिनको क्वारेन्टाइनबाट बच्न नकारात्मक पीसीआर परीक्षण प्रदान गर्न चिन्ता लिनुपर्दैन, र दिनमा 8०,००० भन्दा बढी आवागमन भएपछि, यो यात्रा प्रतिबन्धले देखाउँदछ।
२०१ 2019 को तुलनामा अहिले हवाईमा धेरै आगन्तुकहरू छन्। यदि तपाइँ वाईकिकीको कालाकाउ एभिन्यूमा टहल वा ड्राइभ लिनुहुन्छ भने, केवल5percent प्रतिशत मानिसहरूले मास्क लगाएका छन्। यद्यपि नयाँ केसहरू धेरै छन्, राज्यपालबाट एक जनाले फेला पारेको जनादेश फेला परेन।
हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक प्रवृत्ति पछ्याइरहेको छ कि मानिसहरु निराश छन् र मानसिक रूपमा प्रतिरक्षा। उनीहरू अब मास्क गर्न को परवाह गर्दैनन्, जुन COVID-19 को बिरूद्ध पूर्ण खोप लिनबाट अलग रहन सबैभन्दा एकल निवारक हुनेछ। यो हानिकारक मानसिकता र खतरनाक विकास हो।